Android ကိုသော့ခတ်ရန်နည်းလမ်းသစ်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး စည်းချက်ပေးပါ !! | Androidsis
Android အတွက်အသုံး ၀ င်တဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှု application တွေကိုငါဘယ်လိုသဘောရလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏လုံခြုံရေးအတွက် application ကိုအသုံးပြုသည် ကျနော်တို့ရှိသည်သွားကြသည်နှင့်အတူ ရုပ်ရှင်၏ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည့်အရာနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသော Android သော့ခလောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်ပြီးပြီဟုထင်သောအခါဤကဲ့သို့သော application အသစ်များသည်အမှန်တရားအားကျွန်ုပ်၏ Android လည်ပတ်မှုစနစ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း၏ကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ခြေများကို ထပ်မံ၍ ပျော်ရွှင်စေသည်။
LG နှင့်၎င်း၏မူပိုင်ခွင့်စနစ်ကြောင့်ဤတည်ရှိပြီးဖြစ်သည်ဟုလူအများကပြောကြသည်မှာသေချာပါသည် ကုဒ် Knock ၎င်းသည်၎င်း၏အချိန်တွင်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ဆင်တူသော်လည်းငါပိတ်ပင်ထားသည့်စနစ်သည်အလားတူပင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ထိုအရာနှင့်မပတ်သက်ကြောင်းငါပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့ငါသင့်အားယနေ့တင်ပြမည့် Android သော့ခတ်စနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏သော့ခတ်မျက်နှာပြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောခလုတ်များ၏အမှတ်တရနှင့်စည်းချက်ကိုအခြေခံသည်။ အပြည့်အဝ configurable လမ်းအတွက်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့်၊ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှနာမည်အောက်ရှိတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည့်အခမဲ့ application အားဖြင့်ဤအောင်မြင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရတော့မည်ဟုအမြဲတမ်းပြောသကဲ့သို့ Locker ကိုနှိပ်ပြီးသောကွဲပြားသောသော့ခတ်မျက်နှာပြင်တစ်ခု (အတည်မပြုရသေးသော)။ ဒီ Android လိုင်းများအောက်တွင်ငါထားခဲ့သည့် box မှသင်၏ Android တွင်သင်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
1 Tap Locker - မတူညီသောသော့ခတ်မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား (အတည်မပြုရသေးသော) ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
2 Android app ကိုလုံခြုံပြီးမတူညီသောနည်းလမ်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
Tap Locker - မတူညီသောသော့ခတ်မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား (အတည်မပြုရသေးသော) ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
Android app ကိုလုံခြုံပြီးမတူညီသောနည်းလမ်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာမင်းကိုဘယ်လိုပြမလဲ၊ စာဝှက်ရန်ခက်ခဲစွာသောလုံခြုံရေးစနစ်အကယ်၍ သင်ထိတွေ့မှု၏အစီအစဉ်သည်စည်းချက်တေးသံအဖြစ်ယခင်ကမသိခဲ့ပါက terminal ကိုပိုင်ဆိုင်သောအသုံးပြုသူသည်စည်းချက်သောသော့ဖွင့်ခြင်းပုံစံအနေဖြင့်ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းမဟုတ်လျှင်၊
Android lock code အသစ်တစ်ခုကိုစည်းချက်အတိုင်းအသာပုတ်။ ထည့်သွင်းခြင်းသည် application settings နှင့် Lock Screen Tap Pattern အပိုင်းတွင်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Terminal ကိုသော့ခတ်အဖြစ်အသုံးပြုလိုသောစည်းချက်အတိုင်းထိခြင်း၏ဆက်တိုက်အချက်များကိုလုပ်ဆောင်ပါ.
ထိ၏စည်းချက် sequence ကိုထွက်သယ်ဆောင်ပြီးတာနဲ့စည်းချက်ပုံစံကိုအတည်ပြုရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်, ကျနော်တို့စည်းချက် sequence ကိုမျိုးပွားကြောင်း verify နိုင်သည့်အတွက်မျက်နှာပြင်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသည့်သော့ဖွင့်ပုံစံသည်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်လိုသောအရာများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပထမဆုံး Android ပိတ်ဆို့ခြင်းစည်းချက်မှုကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်စိတ်မပူပါနှင့်၊ လျှောက်လွှာကသင့်အားလုံခြုံရေးမေးခွန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးလိမ့်မည်။ rhythmic unlock key ကိုမေ့သွားရင် Android ရဲ့ unlock ကိုပြန်လည်ရယူပါ ငါတို့ထားပြီ။
ကင်မရာနှင့် dialer ဖြတ်လမ်းများနှင့်အမြန်ချိန်ညှိချက်များ
သင်၏မိတ်ဆွေများကိုသူတို့၏ပါးစပ်များအားဖွင့်ထားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ချရသောဤလုပ်ငန်းဆောင်တာအပြင် app သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလည်းဖြစ်နိုင်သည် ဖြတ်လမ်းများကို enable သို့မဟုတ် disable စည်းချက်ကျတဲ့သော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုထည့်စရာမလိုပဲကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ကင်မရာသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းခေါ်ဆိုသူသို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်၊ (အကယ်၍ စည်းချက်သောသော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုသွားရန်လိုအပ်ပါကဤနေရာတွင်)သို့မဟုတ်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး၊ Wi-Fi, Bluetooth သို့မဟုတ် terminal ၏ volume ထဲသို့ Quick Settings သို့မဟုတ်ဖြတ်လမ်းအချို့ကိုထည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုသော့ဖွင့်နှင့်အတူအရောင်ကိုပြောင်းလဲကြောင်း gradient ကိုနောက်ခံပုံ
ဒီလျှင်ကျနော်တို့ထည့်ပါ အများအပြားသော့ခတ် Wallpapers များအကြားရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေလျှောက်လွှာ၏တုန်ခါမှု၏ပြင်းထန်မှုကို enable, disable or modify လုပ်ရန်သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုဒ်များထည့်ခြင်းကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးချယ်စရာများ ကျွန်ုပ်ဖန်တီးထားသောသော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ရန်မလိုတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Android ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်နိုင်ခဲ့သောစိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံး Android သော့ခတ်မျက်နှာပြင် application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android ကိုသော့ခတ်ရန်နည်းလမ်းသစ်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး စည်းချက်ပေးပါ !!
AnTuTu Benchmark ၏အဆိုအရမတ်လ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု